Usebenza njani ukunciphisa umzimba? - siyawuqonda umzimba
Iindlela ezifanelekileyo zokutshisa amanqatha Ukunciphisa umzimba (okanye ukutshisa amanqatha) kwenzeka xa umzimba uqala ukusebenzisa iidipozithi ezikhoyo ukwenza amandla. Ukumenza ukuba enze oku akukho lula. Kuyimfuneko ukwenza ukunqongophala kweekhalori ezisetyenziswe ekutyeni. Oku kuya kubangela ukunqongophala kwamandla emzimbeni, oya kuthi uzalise ngamanqatha.
Kukho iindidi ezimbini zomthombo wamandla - glycogen Namanqatha. Ezokuqala zilula kakhulu ukuziguqula, ke ngoko umzimba uzisebenzisa kuqala. Kungenxa yoku ukuba naluphi na uqeqesho kufuneka luhlale ubuncinci sisiqingatha seyure, kungenjalo umcimbi awuyi kuza kumanqatha atshisayo.
Amanqanaba okunciphisa umzimba
Amafutha ayindawo yokugcina umzimba, ke kuyathandabuza ukwahlukana nawo. Kananjalo, baqala ukugqitywa kuphela ubuncinci bemithwalo, ngenxa yoko ukusebenza kukude kwaye kubonelela ngomthwalo ofanelekileyo.
Kukho izixhobo ezinokukhawulezisa ezi nkqubo. Umzekelo, i-Phyto Liposaktor yehla ukunciphisa umzimba. Bona, njengamanye amayeza atshisa amanqatha, bakhawulezisa i-lipid metabolism kunye nokwandisa imveliso yehomoni ejongene nokusetyenziswa kwamafutha.
Kwenzeka njani ukunciphisa umzimba?
Ekuqaleni, umzimba wethu uphulukana namanzi kuphela, ke xa uyeka ukwenza umthambo okanye isondlo esifanelekileyo, ubunzima buyabuya kwangoko. Kamva, isixa ubunzima kwezihlunu uqala ukunciphisa. Le nkqubo ihamba kunye nokukhutshwa kwe-cortisol, ihormone yoxinzelelo. Ngenxa yoko, ukwanda kokucaphuka, ukuphulukana namandla.
Ke ngoko, ngelixa unciphisa umzimba, kufuneka ulale ngakumbi ukuze ube nexesha lokuchacha. I-Metabolism iyakhawulezisa ukuze ekugqibeleni ifumane indawo kweli nqanaba.
Ngokubanzi, inkqubo yokwehla kobunzima ingahlulwa ibe ngamanqanaba ama-3:
Ukwehla ngokukhawuleza kobunzima (amanzi kunye nezihlunu ziyahamba);
Ukucotha ukwehla kobunzima (iqala ukutshisa amanqatha kancinci);
Isigaba sokulungisa (i-metabolism ekhawulezileyo ihlala isebenza ngendlela entsha).
Akulunganga ukulindela ukuba ubunzima bakho buza kuhamba ngokulinganayo. Kodwa uninzi, xa uqaphela ukuba ukwehla kobunzima sele kumisiwe, abanamandla okulinda iziphumo zokugqibela.
Iindlela zokutshisa amanqatha
Zeziphi iindlela onokuthi ufezekise ukunciphisa umzimba kwangoko? Umdibaniso wesondlo esifanelekileyo kunye nokuzilolonga yeyona nto ilungileyo. Ukutya okunekhalori ezisezantsi kuphela kunciphisa imetabolism, njengokuzila ukutya. Ekusebenzeni, uqeqesho lwamandla yeyona nto imbi kakhulu. Ke ngoko, kufanelekile ukunika ingqalelo kwimithambo ye-aerobic: ukubaleka ngokuqubha ukuhamba ngebhayisikile
Inani elaneleyo lamanzi emzimbeni linokukhawulezisa iinkqubo ze-metabolic. Kufuneka usele malunga neiglasi ezisi-8 yonke imihla ukuphucula ibhalansi yamanzi. Umzimba kufuneka utshise iikhalori ezininzi xa usela iziselo ezibandayo, kodwa akufuneki ube nenzondelelo apha.
Iinkqubo zeMetabolic zihamba ngokukhawuleza kunye nobukho beziqholo ezishushu ekutyeni. Amayeza anokunceda apha. Umzekelo, ukuba ufunda uphononongo loogqirha malunga neziyobisi iPhyto Liposaktor, unokubona ukuba bacebisa amantombazana ukuba anciphise umzimba ngeli chiza. Iqhelanisa nendlela yokucola ukutya, icoca umzimba kwaye isebenzise iinkqubo zokutsha kwamafutha.
Ukwehla kwesisindo kuyakhawuleza kubantu abanezihlunu ezikhulu. Ke ngoko, yakha ngaxeshanye ngexesha lokuzilolonga rhoqo, ke uqala iinkqubo zokwenza metabolic.
Ngaphambi kokulahleka kobunzima obukhulu nangayiphi na indlela, ukubonisana nogqirha kuyafuneka!
Ukuthambisa ngetawuli eroliweyo: uphononongo, inkcazo
Ungayifaka njani ingqondo ngokwasengqondweni ukuze unciphise umzimba. Isimo sengqondo sokulahleka kobunzima
Ungawucoca njani umzimba ngaphambi kokuba ulahlekelwe sisisindo ekhaya: unyango, uphononongo
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokutya ekhaya? Ukuphungula ubunzima ngaphandle kokutya
Edlulileyo Ukutya kwaseJapan okungenatyuwa-ukunciphisa umzimba ngokufanelekileyo
Okulandelayo Ukutya kwamanzi - Ukuphulukana ne-5 kg ​​ngaphandle koxinzelelo
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,786.